Isku Shandhayn Golaha Wasiirada Dawlada Degaanka Somalida Ethiopia – Rasaasa News
Jan 15, 2012 Isku Shandhayn Golaha Wasiirada Dawlada Degaanka Somalida Ethiopia, Ogaden, ONLF
Jijiga, January 15, 2012 [ras] – War ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawlada degaanka Somalida Ethiopia, ayaa sheegaya in isku shaandhayn lagu sameeyey qaar ka mid ah golaha wasiirada, xubno cusubna la soo galiyey golaha wasiirada.
Digreeto madaxweyne oo ay ku qoran yihiin isbadalka iyo magacyada masuuuliyiinta uu saameeyey ayuu shalay subax u akhriyey wasiirka madaxtooyada ahna madaxweyne ku xigeenka iyo ku simaha madaxweynaha dawlada degaanka Somalida Cabdifataax Maxamed.
Wasiirada wasaaradaha la isku shaandheeyey ayaa kala ah;
1. Wasiirkii waxbarashada mudane Cabdiqadir Iiman,ayaa hada loo magacaabay wasiirka wasaarada beeraha iyo horumarinta reer miyiga
2. Wasiirkii caafimaadka mudane Rashiid Guuleed, ayaa hada loo magacaabay wasiirka wasaarada Waxbarashada.
3. Wasiirkii dakhliga mudane Xabiib Muxumed, ayaa hada loo magacaabay wasiirka wasaarada Caafimaadka.
Dhinaca kale waxaa soo galay golaha wasiirada dawlada degaanka Somalida Ethiopia mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed [Gurey], oo hore u ahaan jiray wasiirka ganacsiga ee dawlada dhexe, haatana loo magacaabay wasiirka dakhliga dawlada degaanka Somalida.